Shiinaha oo sheegay in Ozil uu helay war been ah oo ku saabsan Muslimiinta Uighur uguna baaqay inuu dalkooda soo booqdo
Mogadishu - 01:13:11
Monday December 16, 2019 - 22:12:35 in Wararka by Super Admin
Wasaaradda Arrimaha dibadda waddanka Shiinaha ayaa sheegtay in laacibka kooxda Arsenal, Mesut Ozil uu helay akhbaar been abuur ah oo ku saabsan in Shiinuhu uu si xun ula dhaqmo muslimiinta Uighur-ka ee gobolka Xinjiang.
Xidiggan Turkiga ah ee haysta dhalashada Jarmalka Ozil ayaa waxa baraha bulshada ku shaaciyay war ku saabsan in dowladda Shiinuhu ay qaab aan wanaagsanayn kula dhaqanto dadka Uighur-ka ee Muslimiinta ah, isla markaana ku tilmaamay shacabkaasi inay yihiin kuwo dagaalyahanno ah oo ka dhiidhinaya dulmi.
Arrintaasi ayaa keentay in telefishinka qaranka Shiinuhu uu joojiyo ciyaar uu toos u tebin lahaa oo ay isaga hor imaadeen shalay kooxaha Arsenal iyo Manchester City.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha dibadda Shiinaha oo lagu magacaabo Geng Shuang ayaa ugu baaqay Ozil in uu booqasho ku yimaado deegaanka ay Muslimiintaasi deggan yihiin ee Xinjiang si uu u soo arko xaaladda dhabta ah.
Dhanka kale Qarammada Midoobay iyo hay’adaha xuquuqda bani’aadamka ayaa sheegay in ku dhowaad 1 Milyan oo Muslimiinta Uighur-ka Shiinaha ay ku jiraan xarummo dhaqan celin ah oo ay dowladda dalkaasi u furtay si maskaxdooda looga tir tiro caqiidada Islaamka sida Shiinuhu aaminsan yahay.